စိမ့်စမ်းရေ ဆိုဒ်ဆောင်းပါးများ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မျက်ကြည်လွှာ ပွန်းပဲ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း ……..
မျက်ကြည်လွှာ ပွန်းပဲ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း …….. မျက်ကြည်လွှာဆိုသည်မှာ မျက်လုံး၏ ရှေ့ဘက်စက်ဝိုင်းပုံ ကြည်လင် တောက်ပသော တစ်သျှူးအပိုင်းဖြစ်ကာ မျက်စိသို့ ဝင်လာသော အလင်းရောင်ကို ဆုံမှတ်ကျစေရန် အထောက်အကူ ပြုရပါသည်။ အဆိုပါ တစ်သျှူးသည် ပြတ်ရှခြင်း သို့မဟုတ် ကုတ်ခြစ် ခြင်းခံရသော အခါ မျက်ကြည်လွှာ ပွန်းပဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေါ်မည်။ မျက်ကြည်လွှာ ပွန်းပဲ့ ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အောက်ပါ အကြံပြုချက်များကို အမေရိကန်မိသားစု သမားတော်များ အကယ်ဒမီက…
categories: ဗဟုသုတ | |
ဆေးလိပ်ဖြတ်သင့်သော ထိပ်တန်းအကြောင်းပြချက် ရှစ်မျိုး …….
ဆေးလိပ်ဖြတ်သင့်သော ထိပ်တန်းအကြောင်းပြချက် ရှစ်မျိုး ……. ၁။ ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ရမ်းနဲ့ ရင်ကျပ်ပန်းနာ ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။ ၂။ ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် ပျှမ်းမျှသက်တမ်း ၁၀ နှစ်ပို တိုသွားပါတယ်။ ၃။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အချိန်ကြာတတ်ပြီး ကလေးပျက်ကျနှုန်း များပါတယ်။ လမစေ့ မွေးတာ ဒါမှမဟုတ် ပေါင်ချိန်မပြည့် မွေးတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အမျိုးသားတွေမှာ ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်တတ်သလို သုတ်ပိုး အရည်အချင်းတွေလည်း ညံ့ဖျင်းတတ်ပါတယ်။ ၄။ သင်…
Posted by စိမ့်စမ်းရေ on
categories: ကျန်းမာရေး | |
လိပ်ခေါင်းရောဂါ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါသလား ……………
လိပ်ခေါင်းရောဂါ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါသလား …………… လိပ်ခေါင်း ( piles ) ရောဂါက မျိုးရိုးလိုက်တတ်တဲ့ တွေ့ရှိချက်မျိုး မရှိသေးတဲ့အတွက် မျိုးရိုးမလိုက်တတ်ဘူးလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ လိပ်ခေါင်းရောဂါက ဝမ်းချုပ်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဝမ်းချုပ် ပြီး ဝမ်းမာမာသွားတဲ့အခါ အူကြွက်သားတွေကို အတင်းညှစ်ရတာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အသီးအနှံ စားတာနည်းခြင်း၊ အသားနဲ့ အပူအစပ်စားတာများခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းစတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံကြောင့်လည်း ဝမ်းချုပ်ကာ လိပ်ခေါင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိပ်ခေါင်းဖြစ်တိုင်း…
ဓမ္မတာ အကြိုဝေဒနာများရှိလျှင် ………………………
ဓမ္မတာ အကြိုဝေဒနာများရှိလျှင် ……………………… ဓမ္မတာ အကြိုဝေဒနာများရှိလျှင် (Prementstrual Syndrome) Evening Prim Rose Oil သောက်ပါ။ Essentiak fayttyacids တွေ ချို့တဲ့ရင် ဓမ္မတာ ဝေဒနာအကြို (ဥပမာ သားမြတ်နာကျင်တာ၊ ဆီးစပ်ကိုက်တာ၊ စိတ်တိုတာ) ကို ဆိုးရွားစွာ ခံစားရတတ်တယ်လို့ သုတေသန ပြုသူအများစုက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဓမ္မတာ လာခါနီးရက်တွေမှာ Evening Prim Rose Oil ကို သုံးလုံးမှ ခြောက်လုံးအထိ နေ့စဉ်သောက်ပေးပါ။ ပြောင်းဖူးဆီနှင့် ဟင်းချက်ပါ။ PMS ဖြစ်တာဟာ အမျိုးသမီး ဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ ပရိုဂျက်စထရုန်းတွေဟာ လစဉ်အပြောင်းအလဲ…
ပြည်တွင်းသတင်းများ ဖတ်ရှုရန်…… http://www.elevenmyanmar.com/ ပြည်တွင်းသတင်းများကို အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းနဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် Eleven media group ရဲ့ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး စသည်ဖြင့် သတင်းကဏ္ဍစုံလင်စွာ ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြပေးနေတဲ့ ဆိုက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Hot ဖြစ်တဲ့ သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုလည်း စုံလင်စွာ ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Home Page မှာ သတင်းအညွှန်းတွေကို တွေ့မြင်နိုင်ပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပြည်တွင်း လူနေမှုဘ၀၊ ခရီးသွား၊ အမြင်၊ အားကစား စတဲ့…
Posted by စိမ့်စမ်းရေ on Monday, August 27, 2012
categories: ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များကို လေ့လာခြင်း | |
မီးခိုးမထွက်သော ဆေးရွက်ကြီး သုံးစွဲမှုပုံစံကြောင့် ဖြစ်စေနိုင်သည့် ပြဿနာများ
မီးခိုးမထွက်သော ဆေးရွက်ကြီးကို စွဲလမ်းစေတတ်သည့် နီကိုတင်းဓာတ်ပါရှိမြဲဖြစ်ကာ သင်၏တွေးခေါ်မြော်မြင်မှုနှင့် အပြုအမူများတွင် ဆိုးကျိုးကျရောက်နိုင်သည်။ ဆေးရွက်ကြီးထည့်ပြီး ကွမ်းစားခြင်းကဲ့သို့ မီးခိုးမထွက်သော ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုသည် သင်၏သွေးတွင်း နီကိုတင်းရောက်စေရာတွင် စီးကရက်သောက်ခြင်းထက်သာလွန်သည်။ အခြားအန္တရာယ်များမှာ- သွားအရောင်ပျက်ခြင်းနှင့် သွားများပွန်းပဲ့ခြင်း အပါအဝင် သင်၏သွားများ ပျက်စီးမှုဖြစ်ရခြင်း သွားဖုံးများ ပျက်စီးခြင်း…
ဘာကြောင့် ဘယ်သန်ညာသန် ကွဲနေရသလဲ …………..
ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်ပုံပေါ် မူတည်ပြီး ဘယ်သန်နဲ့ ညာသန်ကွာခြားနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်ခြမ်းကို ထိန်းချုပ်နေပြီး ဦးနှောက်ညာဘက်ခြမ်းကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်ဘက်ခြမ်းကို ထိန်းချုပ် နေပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့တစ်ခြမ်းက တခြားတခြမ်းထက် အမြဲပိုပြီး သန်မာကာ ပိုလွှမ်းမိုးတတ်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ဘက်ခြမ်းကလည်း တခြားတစ်ဘက် ထက်ပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးကာ ပိုအစွမ်းထက်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစု (၉၀ရာခိုင်နှုန်း…
နုပျိုစေမည့် အားကစား …………….
Stanford University School ၏ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်တွင် ပုံမှန်လှုပ်လှုပ်ရှားရှား အပြေးလေ့ကျင့်တတ်သူသည် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်း၊ ကင်ဆာစောစီးစွာဖြစ်ခြင်း၊ အာရုံကြောရောဂါ သို့မဟုတ် ကူးစက်ရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ အသက် ၅၀ ကျော်အရွယ် အပြေးလေ့ကျင့်တတ်သူနှင့် လုံးဝအပြေးမလေ့ကျင့်သူ အယောက်တစ်ထောင်စီကို လေ့လာကြည့်ရာ နှစ်ပေါင်း၁၉ နှစ်အကြာ၌ ပုံမှန်မပြေးသူ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် သေဆုံးခဲ့ကြပြီး ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသော…
၁။ အ၀လွန်ရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ။ ပုံမှန် ကိုယ်အလေးချိန်ထက်များပြီး ၀ခြင်း (Overweight) နဲ့ အ၀လွန်ရောဂါ (Obesity) ရယ်လို့ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထုထည် စံနှုန်း Body Mass Index (BMI) နှင့် တိုင်းပါတယ်။ BMI=ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ BMI ၁၈ မှ ၂၅ ကြားမှာရှိနေရင် ပုံမှန်ပါပဲ။ ၂၅ ထက်ကျော်သွားရင်၊ (အရပ်အမြင့်မီတာ)၂ ကိုယ်အလေးချိန်များတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး၊ ၃၅ ထက်ကျော်သွားရင် အ၀လွန်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ၂။ အ၀လွန်ရင် ဘာအန္တရာယ်ရှိသလဲ။ အ၀လွန်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် သွေးချို၊ ဆီးချိုဖြစ်တက်တယ်။ သွေးတိုးရောဂါလည်း ပိုဖြစ်လွယ်တယ်။…
မျက်ကွင်းညိုခြင်း (Take Care)
မျက်ကွင်းညိုခြင်းဟာ တကယ်တော့ ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ မျက်လုံးနားက အသားအရေဟာ မျက်နှာပြင်ရှိ တခြားအသားအရေများထက် ပိုပြီးတော့ ပါးလွှာပါတယ်။ မျက်လုံးပတ်ပတ်လည်မှာ အာဟာရပြု ထောက်ပံ့ နေတဲ့ သွေးကြောလေးတွေက အင်မတန်သေးငယ်ပြီး အဲဒီဆံချည်မျှင် သွေးကြောလေးတွေထဲမှာရှိတဲ့ဟေမိုဂလိုဘင် (Hemoglobin)များပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလာဒ်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မျက်လုံးပတ်လည်ကိုထိခိုက်မိခြင်း ( ဥပမာ – လက်သီးဖြင့်အထိုးခံရခြင်း) တို့ တွင် သွေးကြောများပျက်စီးခြင်းကြောင့် မျက်လုံး ပတ်ပတ်လည်မှာ အညိုအမဲစွဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးပတ်ပတ်လည်ရှိ…
ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကို အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရသလို ဈေးလည်း သက်သာတာကြောင့် လူတိုင်းလိုလို စားနိုင်ကြပါတယ်။ လူတွေ အများအားဖြင့် စားလေ့ရှိကြတဲ့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်မှာ ဘယ်လို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။(၁) အစာကြေစေခြင်းဟင်းနုနွယ်ရွက် တစ်ခွက်စာ ပမာဏမှာ တစ်နေ့တာ စားသုံးသင့်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်ပမာဏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာကြေစေပြီး ဝမ်းချုပ်တာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေပြီး အစာကို အလွန်အကျွံ မစားမိစေပါဘူး။(၂) ကင်ဆာကို ကာကွယ်ခြင်းဟင်းနုနွယ်ရွက်မှာ များစွာ ပါဝင်တဲ့…
အုန်းဆီဟာ အမျိုးမျိုးသော ဘက်တီးရီးယားများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားများ၊ ယားနာများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းမှလည်း ကင်းဝေးစေပါတယ်။ ကျောရိုးမကြီးကင်ဆာ၊ အနောက်တိုင်းက အမျိုးသမီးတွေအဖြစ်များတဲ့ ရင်သား ကင်ဆာနဲ့ တခြားသော ကင်ဆာ အမျိုးအစားတို့ကိုလည်း ကာကွယ်ပေး ပါတယ်။ အုန်းဆီဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ အဆီတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အုန်းဆီကို ခေါင်းလိမ်းဆီအဖြစ်နဲ့သာ အသုံးများကြပါတယ်။ တချို့သော ပျိုမေများကတော့ အုန်းဆီကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။ ခေတ်ပေါ် Hair Coat စတဲ့ကေသာသုံးအလှကုန်…
အိမ်တိုင်းမှာဆားဆိုတာရှိနေပေမယ့် အိမ်တိုင်းကတော့ဆားအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမှာမဟုတ်လို့… ဆားအကြောင်းကိုတင်ပြချင်ပါတယ်… ဆားဟာ…သဘာဝတရားအရငန်တာတော့သိပြီးကြမှာပါ.. ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်ထူးခြားတာတွေရှိနေပါတယ်…. ဆားဟာအပူမျိုးဖြစ်ပါတယ်.. လက်နဲ့ကိုင်လို့မပူတာကလွဲရင်..ဆားဟာအပူအနေနဲ့လူတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်.. လူတွေမှာ..ဆားဓါတ်ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်.. ဆားဓါတ်နည်းရင်အားအင်ကုန်ခမ်းလာပါတယ်.. ဒါကြောင့်ဓါတ်ဆားရေဟာလူမမာအတွက်ရော ကာယလုပ်သားများအတွက်ပါ… မဖြစ်မနေလိုအပ်သလို..ချွေးထွက်များ သောသူ..အဟာရနည်းသူတွေအတွက်သက်စောင့်ဆေးပါ… ရေခဲသေတ္တာထဲမှာရိုးရိုးရေတစ်ခွက်..ဆားဖျော်ထားသောရေတစ်ခွက်ယှဉ်ထဲ့ကြည့်ပါ..ဆားပါသောခွက်ကမခဲသွား…
လေးဖက်နာ နှင့် ဆေးကောင်းတလက်လေးဘက်နာဟာ လူရွယ်တွေ သိချင်ကြတဲ့၊ သိသင့်တဲ့ ရောဂါတခုပါ။ ဆေးစာမှာတော့ အနီးစပ်ဆုံးက Rheumatismဖြစ်ပါတယ်။ Rhumatic အဆစ်နာ၊ Rhumatic အဖျား၊ Rhumatic နှလုံးရောဂါ၊ စတာတွေကို ခြုံခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသုံးက နဲနဲတော့ ခေတ်နောက်ကျသွားပါပြီ။ ရောကော သောကော လုပ်ရာကျနေလို့ပါ။ ဒီအုပ်စုဝင် Arthritis ရောဂါကို ကုရတာနဲ့ Lupus ကို ကုရတာ ဘာမှမဆိုင်အောင် မတူလို့ ရောဂါအုပ်စု တခုထဲ လုပ်ဘို့ မဆီလျှော်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။Arthritis အဆစ်နာတယ် ဆိုလိုက်ရင် လေးဘက်နာလို့ဘဲ ထင်ကြတယ်။ နဲနဲတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆစ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့နှလုံး၊ အရေပြား၊…
Posted by စိမ့်စမ်းရေ on Tuesday, August 21, 2012
(၁)။ ။လေဖြတ်သောလူနာကို (မည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ) ဖြစ်သောနေရာမှ ရွှေ.ပြောင်းသယ်မခြင်း မပြုရပါ။ ထိုသို့ချက်ခြင်းရွှေ.ပြောင်းသယ် ဆောင်ပါက ကားဆောင့်ခြင်း အစရှိသော လှုပ်ရှားခြင်းဒဏ်များကြောင့် ဦးနှောက် သွေးကြောငယ်များကို လျှင်မြန်စွာပေါက်ကွဲစေပြီး လူနာ၏အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေပါသည်။ ထို.ကြောင့် ရွှေ.ပြောင်းခြင်း မပြုပါနှင့်။ (၂)။ ။လူနာကိုဖြစ်သည့်နေရာတွင်ပင် အသာထူမပေးပြီး ပြန်လဲမကျအောင်အသာမှေးပြီး ထိုင်စေရပါမည်။ လူနာကိုယ်တိုင်မထိုင်နိုင်ပါက ဘေးမှတစ်ဦးက ထူမပေးထားပါ။ပြီးနောက် ပိုးသတ်ထားသော ဆေးထိုးအပ် (သို.) လက်အပ်ဖြင့် လူနာ၏ လက်ချောင်း…
Posted by ရာဇာထွေး on August 20, 2012 at 9:00pm View Blog ဘဒ္ဒကမ္ဘာတွင် ပွင့်တော်မူသော ဘုရားငါးဆူ ၁။ ကကုသန်မြတ်စွာဘုရား ၂။ ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရား ၃။ ကဿပမြတ်စွာဘုရား ၄။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ၅။ အရိမေတ္တေယျမြတ်စွာဘုရား (နောင်ပွင့်တော်မှုမည်) သာသနာတော်သုံးရပ် ၁။ ပရိယတ္တိ သာသနာ = ပိဋကပ်စာပေသင်ကြားခြင်း ၂။ ပဋိပတ္တိ သာသနာ = တရားတော်နှင့်အညီကျင့်ခြင်း ၃။ ပဋိဝေဒ သာသနာ = ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း ရတနာသုံးပါး ၁။ ဘုရား ၂။ တရား ၃။ သံဃာ ဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သောအချက်များ မြတ်စွာဘုရား၏ ဖခမည်းတောအမည်…
Posted by စိမ့်စမ်းရေ on Monday, August 20, 2012
categories: ဘာသာရေးစာပေများ | |
Ringtone များ ရယူရန်
Ringtone များ ရယူရန် (http://audiko.net) ဖုန်း ringtone တွေကို အမျိုးအစား စုံလင်စွာနဲ့ download ပြုလုပ်ရယူနိုင်စေမယ့် ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Android, iPhone အစရှိတဲ့ ဖုန်းတွေထက် Ringtone တွေ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ringtone တွေကိုလည်း အမျိုးအစားအလိုက် ခွဲခြား ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဆိုက်မှာ ရှိပြီးသား ringtone တွေကိုအခမဲ့ download ပြုလုပ်ရယူနိုင်သလို စိတ်ကြိုက်သီချင်းတွေကိုလည်း ဆိုက်မှာ upload ပြုလုပ်ပြီး ringtone ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Download မပြုလုပ်ခင် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် နားဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ကာ စိတ်ကြိုက် ringtone…
Posted by စိမ့်စမ်းရေ on Sunday, August 19, 2012
ဦးထုပ်ဒီဇိုင်း မျိုးစုံ လေ့လာရန်…… (http://www.lids.com) ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ဒဏ်ကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့် ဦးထုပ် ဒီဇိုင်းစုံကို အမှတ်တံဆိပ် မျိုးစုံနဲ့ တွေ့ရမယ့် ၀က်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးထုပ်ကို အမှတ်တံဆိပ်လိုက်သာမက နှစ်သက်ရာ အားကစား အသင်းတွေရဲ့ အမှတ်အသား၊ ဒီဇိုင်းပုံစံ အတိုင်းလည်း တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အခြား အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း အချို့ကိုလည်း ဒီဆိုက်မှာ တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အ၀ိုင်းရော လျှာထိုးပါ နှစ်မျိုးလုံး စုံလင်စွာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နှစ်သက်ရာ အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး နှစ်သက်ရာ အားကစားအသင်း…
ကဗျာများ ဖတ်ရှုရန်….. (http://www.best-poems.net) နာမည်ကျော် ကဗျာဆရာကြီးတွေရဲ့ ထိပ်တန်းကဗျာတွေကို စုံလင်စွာ ဖတ်ရှုရမယ့် ၀က်ဘ်ဆိုက်စြဖ်ပါတယ်။ ခေတ်အသီးသီးမှာ ပေါ်ထွက်ထင်ရှာခဲ့ကြတဲ့ ကဗျာဆရာတွေက ၄င်းတို့ခေတ်၊ စနစ်တွေအကြောင်း ဖော်ပြတဲ့ ကဗျာတွေကို အသားပေးရေးဖွဲ့ခဲ့ကြပြီး စိတ်ဓာတ်အင်အားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် ကဗျာမျိုးတွေကိုလည်း ရေးဖွဲ့ခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကဗျာဆရာတစ်ဦးက ၄င်းရေးသားခဲ့သော အကောင်းဆုံး ကဗျာတွေဟာ အဆိုးဝါးဆုံးသော စိတ်ခံစားမှုတွေကနေ ပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကဗျာတွေကို စိတ်ခွန်အားပေးမယ့်အမျိုးအစား၊ ရယ်စ၇ာ ဟာသ…
ခဲပန်းချီများ ဆွဲရန်…. (http://www.sketchmyphoto.com) ဓာတ်ပုံတွေကို ခဲပန်းချီအဖြစ် လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲဖန်တီးနိုင်စေမယ့် ၀က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတူ ခဲပန်းချီတွေကို ကိုယ်တိုင်အတွက်သာမက၊ အဆောက်အဦးတွေ၊ ရှုခင်းပုံတွေ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေ လေးတွေ၊ ဘိုးဘွားတွေရဲ့ အမှတ်တရတွေကိုလည်း ဖန်တီး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာထဲကနေ ဓာတ်ပုံတွေကို တိုက်ရိုက် upload ပြုလုပ်ကာ အလွယ်တကူ ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး digital sketch, digital color sketch, digital sketch + retouch, sketch printing, color sketch printing, sketch printing+ frame အစ ရှိတဲ့…
ငွေကုန်ကျမူ အနည်းဆုံးဖြင့် သင့်ကျောက်ကပ် ကို ဆေးပါ။
ကျွန်ပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ကျောက်ကပ်သည် သွေးများမှ ဆားဓါတ်နှင့် အခြားမလိုလားအပ်သောဓါတ်များ ခန္ဓာ ကိုယ်အတွင်း မဝင်ရောက်လာနိုင်အောင် စီစစ်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကျောက်ကပ် တွင်ဓါတ်ဆားများ နှင့်မလိုလားအပ်သော ဓါတ်ဆားများ စုပုံလျက်၇ှိရာ ကျောက်ကပ်အား ဆေးကြောရန်လိုအပ်လာ ပါသည်။ထိုသို့ကျောက်ကပ်ဆေးကို ဆေးကြောလိုပါက အလွန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်း(တရုပ်ရိုးရာ)တစ်ခုရှိပါသည်။ ငွေကုန်ကျမူအနည်းငယ်ဖြင့်ဆေးကြောမူပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ရှေးဦးစွာ တရုတ်နံနံ (Malli leaves or Corriender Leaves) များကို ရေ စင်စင်ဆေးပီး ပဉ္စငါးပါးစလုံး…
Posted by စိမ့်စမ်းရေ on Friday, August 17, 2012
အင်တာနက် သုံးစွဲသူများဟာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချက်အလက် ရဖို့ Search Engine တွေမှာ အများဆုံး ရှာဖွေ ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုရှာရာမှာ တခါတရံမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချက်အလက်ကို SE (Search Engine) က ရှာပေးရာမှာ စိတ်တိုင်းကျတဲ့ ရလဒ်မျိုး မရရှိတတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူရဲ့ ရလဒ် ကို ရှာဖွေ ပေးတာက လူမဟုတ်ပဲ Web Spider (Web Crawler, Web Robot) ဆိုတဲ့ program လေးက ရှာဖွေ ပေးလို့ပါ။ သူက ဘယ်လို ရှာပေးလဲဆိုတော့ ကိုယ်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ query (ရှာလိုတဲ့ စာသား) ပါတဲ့ Site တွေ မှန်သမျှကို လိုက်ရှာပြီး result ပြပေးခြင်း ကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် တခါတရံမှာ…
Tas bar ပေါ်က နာ၇ီပြတဲ့ AM/PM ကို မိမိကြိုက်သလိုနာမည်ပြောင်းချင်ရင်
1. အရင်ဆုံး Window key + R ကိုနှိပ်ပါ။ 2. ပေါ်တာတဲ့ box ကို Run box ဟုခေါ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ regedit လို့၇ိုက်လိုက်ပါ။ registry editor ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ 3.(1) HKEY_CURRENT_USER ကို နှိပ်ပါ ထိုနောက် HKEY_CURRENT_USER အောက်မှ Control Panel ကို ထပ်နှိပ်ပါ 4. nternational ကို ကလစ်ထောက်လိုက်ပါ ညာဘက်(right) တွင် ဖိုင်များပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ထို ဖိုင်များ အတွင်းမှ s1159 ကိုေ၇ွှးပြီး ကလစ်နှစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ Edit String ပာူသော BOX ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ 5. ထိုအခါမှာတော့ပြင်လို့ရပါပီ Value data အောက်တွင် AM ပာု ရှိနေပါလိမ့်မယ် ထို AM ကို Good…
categories: ပြန်လည်ဝေမျှခြင်း | |
DJကိုလင်း(သလ္လာဝတီ)မှတင်ပြသောဘလော့ပို့(စ်)ဖြစ်ပါသည် ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line AGP – Accelerated Graphics Port ALI – Acer Labs, Incorporated ALU – Arithmetic Logic Unit AMD – Advanced Micro Devices APC – American Power Conversion ASCII – American Standard Code for Information Interchange ASIC – Application Specific Integrated Circuit ASPI – Advanced SCSI Programming Interface AT – Advanced Technology ATI – ATI Technologies Inc. ATX – Advanced Technology Extended — B — BFG – BFG Technologies BIOS – Basic Input…
Posted by စိမ့်စမ်းရေ on Wednesday, August 8, 2012
Monitor တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင် ContrastRatio တန်ဖိုးကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့
ယနေ့အချိန်မှာ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအများစု အနေနဲ့ Monitor ရွေးချယ်ရာတွင် CRT (Cathode Ray Tube) Monitorများအစား LCD (Liquid Crystal Display) Monitor များကိုသာ ပိုမို ရွေးချယ်ဝယ်ယူလာကြ တာကို တွေ့ရ ပါ တယ်။ အခုအချိန်မှာ LCD Monitor တစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုးဟာလည်းသင့်တင့်မျှတတဲ့ ဈေးနှုန်းမှာ ရောက်နေပြီဖြစ် တာကြောင့်အသုံးပြုရတာ ပိုမို အဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့ LCD Monitor တွေကိုပဲ ပိုမို ရွေးချယ်လာကြတာဖြစ်ပါ တယ်။ ကဲဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Online ICT Reader ပရိသတ်ကြီးလည်း LCD Monitor တွေရဲ့ အကြောင်းကို အနည်းငယ်လောက်တော့ သိထားသင့်တာပေါ့။ ဒါမှ…
g + ( ဂျီ + ) အကြောင်း တစေ့တစောင်း………….
သိပြီးသားတွေ တော်တော် များနေပေမယ့် မသိသေးသူတွေလည်း ရှိသေးတာမို့ သူဇာလေးက သိသလောက်လေး ပြောပြသွားမှာပါ။ ဂျီ+ကို သီးသန့် တစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်စရာမလိုပါဘူး။ သီးသန့် ဖွင့်ချင်ရင်လည်း ရပါတယ်။ http://www.plus.google.com ကနေ၀င်လဲရပါတယ်။ သူဇာတို့ကတော့ မေးကနေပဲ ဖွင့်လိုက်တာပဲလေ။ ဒါဆို စကြည့်ရအောင်နော်။ အရင်ဆုံး မေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ အပေါ်ဆုံးက ဘားတမ်းကိုကြည့်လိုက်ပါ။ +You, Search, Images…………… စသည်စသည်များ ပေါ်နေတာမြင်ပါလိမ့်မယ်။ +You ဆိုတာကို ကလစ်လိုက်ပါ။ Setup your profile ဆိုပြီး Tab တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်(1) Upgrade Add…
Posted by စိမ့်စမ်းရေ on Sunday, August 5, 2012
categories: နည်းပညာ | |
“ ဆရာမ…….” ဟိုးခပ်ဝေးဝေးကတည်းက မြင်နေရတဲ့ ကျွန်မကို သူတို့တွေ အကျယ်ကြီး လှမ်းခေါ်ကြပါတယ်။ မမှီမှာစိုး၍ ပြေးလာတော့ ခဏလေးရပ်စောင့်ရင်းက….. “သားတို့ ဘယ်သွားကြမလို့လဲ” “မော်ကွန်းထိန်း ဆီသွားမလို့” “ ရန်မဖြစ်ကြနဲ့ဦးနော်….ကောင်းကောင်းသွားကြ” “ဟုတ်” သူတို့လေးတွေ အဝေးရောက်သွားပေမယ့် ကျွန်မ မျက်နှာပေါ်က ခပ်ပြုံးပြုံးလေးကတော့ အိမ်အထိကို ပါလာတော့တာ…..။ မတွေးပဲမနေနိုင် တာမို့ သတိရစရာလေးတွေက လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်က အချိန်လေးကို ခဏရောက်သွား…
categories: သုတ ၊ ရသ ၊ ဆောင်းပါးများ | |
မိသားစု စကားဝိုင်း “ ဗိုက်ဆာတယ်……….ဗိုက်ဆာတယ်…” “ မြန်မြန်……မြန်မြန်…” အလုပ်ရောက်ရောက်ချင်း ကြားနေကျ အသံပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတကာတို့ထက်ထူးခြားတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ အလုပ်ချိန်က7နာရီမထိုးခင်။ “စု……… ညနေက အိမ်မှာထမင်းမစားပြန်ဘူးလား…” “အင်းလေ………ဘယ်သူမှ မရှိတာ…… ဘာမှလဲ မချက်ထားဘူး………….” “အော်………” ခဏခဏမေးနေကျ၊ သိနေကျ ဖြစ်ပေမယ့်၊ ဒီစကားကို လက်မခံနိုင်လို့ပဲလား၊ မယုံလို့ပဲလားတော့မသိပါ ၊ ကျွန်မပဲ ခဏခဏကိုမေးဖြစ်နေတာ။ ခင်တွယ်စရာ…
Posted by စိမ့်စမ်းရေ on Friday, August 3, 2012
Firefox ထက် ဆယ်ဆ မြန်တဲ့ Maxthon
ကိုယ်တိုင်လည်း စမ်းသုံးကြည့်နေပါတယ်။ ကောင်းတယ်လို့လဲ ညွှန်းချင်ပါတယ်။ တော်တော်လေးလဲ မြန်ပါတယ်။ များပြားလှတဲ့ add on တွေကြောင့် ဘာမှထပ်ထည့်စရာမလိုလောက်အောင် အသင့်ရှိနေပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုပြောင်းနည်းလေးလဲ ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ Myanmar3တော့မရပါဘူး။ အဲဒိတော့ Myanmar3နဲ့ ရေးထားတာတွေဆိုရင်တော့ ဖတ်မရလောက်ဘူး။ http://www.maxthon.com/ ( ဒီမှာ ဒေါင်းယူပါ ) ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီးရင်တော့ install လုပ်လိုက်ပါ။…
Posted by စိမ့်စမ်းရေ on Thursday, August 2, 2012
This entry was posted on January 23, 2013, in မှတ်စုမှတ်ရာများ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပဋိပက္ခနှင့် အကြမ်းဖက်မှု →